Indawo yogcino-mpepha yesoya - Ilungelo laseMelika lokwazi
Ukubuyela umva kwe-Thailand kwithintelo le-glyphosate kweza emva kongenelelo lwe-Bayer olubhaliweyo e-US, amaxwebhu abonisa
ezaposwa ngomhla Septemba 17, 2020 by UCarey Gillam
Kunyaka odlulileyo eThailand yayimiselwe ukuvalwa ukhula olusetyenziswa ngokubanzi lokubulala ikhemikhali glyphosate, intshukumo eqhwatyelwa izandla ngabameli bempilo yoluntu ngenxa yobungqina bokuba imichiza ibangela umhlaza, kunye nokunye ukwenzakala kwabantu nokusingqongileyo.
Kodwa phantsi koxinzelelo olunzima oluvela kumagosa ase-US, urhulumente wase-Thailand wasirhoxisa isibhengezo se-glyphosate ngo-Novemba ophelileyo kwaye walibazisa ukubekwa kwezinye izilwanyana ezibulala izitshabalalisi zezolimo nangona iKomiti kaZwelonke yeZinto ezinobungozi ithi ukuvalwa kuyimfuneko ukukhusela abathengi.
Ukuthintelwa, ngakumbi kwi-glyphosate, kuya "kuchaphazela kakubi" ukungeniswa kweThai kwembotyi zesoya, ingqolowa kunye nezinye izinto zolimo, iSebe lezoLimo laseMelika u-Ted McKinney ulumkise iNkulumbuso yase-Thailand u-Prayuth Chan-Ocha ekunyanzeleni ukubuyela umva. Ukungenisa ngaphakathi kunokuba nefuthe kuba ezo zinto zithengiswayo, kunye nezinye ezininzi, zihlala zibotshwe ngentsalela yeglyphosate.
Ngoku, ii-imeyile ezintsha phakathi kwamagosa aseburhulumenteni kunye nomzali waseMonsanto uBayer AG abonisa ukuba isenzo sikaMcKinney, kunye neso sithathwe ngamanye amagosa aseburhulumenteni e-US ukweyisela iThailand ukuba ingavumeli i-glyphosate, ubukhulu becala babhalwa kwaye batyhalwa yiBayer.
Iimeyile zafunyanwa ngesicelo soMthetho weNkululeko yoLwazi liZiko leZinto ezohlukeneyo zezebhayoloji, umbutho wolondolozo ongenzi nzuzo. Inkqubo ye- iqela lamangalela iSebe lezoLimo laseMelika (USDA) kunye neSebe lezoRhwebo laseMelika ngoLwesithathu lifuna ezinye iirekhodi zoluntu malunga nezenzo zamasebe orhwebo nezolimo ekucinezeleni iThailand kumcimbi we-glyphosate. Kukho amaxwebhu amaninzi urhulumente okwangoku anqabile ukukhupha malunga nokunxibelelana neBayer kunye nezinye iinkampani, utshilo umbutho.
UNathan Donley, isazinzulu esiphakamileyo kwiZiko leZinto ezoNgeyantlukwano uthe, "Kubi kakhulu ukuba abaphathi abayihoyanga inzululwazi ezimeleyo ukuxhasa ngokungakhathali ukuzithemba kukaBayer kukhuseleko lwe-glyphosate." "Kodwa ukusebenza njenge-arhente yeBayer ukunyanzela amanye amazwe ukuba amkele esi sikhundla kuyinto embi."
IGlyphosate yile isithako esisebenzayo Kwi-Roundup herbicides kunye nezinye iimveliso eziphuhliswe nguMonsanto, ezixabisa iibhiliyoni zeedola kwintengiso yonyaka. I-Bayer ithenge iMonsanto kwi-2018 kwaye ibisokola ukusukela oko ukucinezela ukwanda kweenkxalabo malunga nophando lwenzululwazi olubonisa ukuba i-glyphosate herbicides inokubangela umhlaza wegazi obizwa ngokuba yi-non-Hodgkin lymphoma. Inkampani nayo ukulwa amatyala ukubandakanya ngaphezulu kwe-100,000 yabamangali abathi bakhulisa i-non-Hodgkin lymphoma yabangelwa kukuvezwa kwe-Roundup kunye nezinye i-Monsanto glyphosate-based herbicides.
Ababulali bokhula lweGlyphosate zezona zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi jikelele, ikakhulu ngenxa yokuba iMonsanto iphuhlise izityalo ezenziwe ngobunjineli ezikunyamezelayo ukufafazwa ngqo ngemichiza. Nangona iluncedo kumafama ukugcina amasimi engenalo ukhula, isenzo sokutshiza i-herbicide ngaphezulu kweentlobo zezityalo ezikhulayo sishiya amanqanaba ahlukeneyo e-pesticide kukutya okuziinkozo okuluhlaza kunye nokutya okugqityiweyo. Abalawuli beMonsanto kunye ne-US bagcina amanqanaba e-pesticide ekutyeni nakwimfuyo yokutya ayinabungozi ebantwini okanye kwimfuyo, kodwa uninzi lwezazinzulu aluvumelani kwaye zithi nokulandela izixa kunokuba yingozi.
Amazwe ahlukeneyo abeka amanqanaba ohlukeneyo omthetho kwinto abaya kugqiba ekubeni ibe ziimali ezikhuselekileyo zombulali wokhula ekutyeni nakwimveliso eluhlaza. Lawo “manqanaba ashiyekileyo aphezulu” abizwa ngokuba zii-MRLs. I-US ivumela ii-MRL eziphezulu ze-glyphosate ekutyeni xa kuthelekiswa namanye amazwe.
Ukuba iThailand iyayinqanda i-glyphosate, inqanaba elivunyelweyo le-glyphosate ekutyeni kunokwenzeka ukuba ibe lilize, uBayer walumkisa amagosa ase-US.
Ii-imeyile zibonisa ukuba ngo-Septemba ngo-2019 kwaye kwakhona ekuqaleni kuka-Okthobha ka-2019 u-James Travis, umlawuli omkhulu we-Bayer kwimicimbi yamazwe aphesheya kwezorhwebo kunye nezorhwebo, wafuna uncedo ekubuyiseni ukuvalwa kwe-glyphosate kumagosa amanqanaba aphezulu aphuma kwi-USDA nakwi-Ofisi yase-United States. Ummeli wezoRhwebo (USTR).
Phakathi kwabo Bayer bafuna uncedo kuZhulieta Willbrand, owayengumphathi wabasebenzi ngelo xesha kwimicimbi yezolimo nakwisebe lezolimo laseMelika. Emva kwesigqibo seThailand sokurhoxisa ukuvalwa kwe-glyphosate, uWillbrand waqeshwa ukuba asebenze ngqo neBayer kwimicimbi yezorhwebo yamanye amazwe.
Xa ebuzwa ukuba ngaba uncedo oluvela kuWillbrand ngelixa wayeligosa likarhulumente lwamnceda ukuba afumane umsebenzi eBayer, inkampani yathi "izama ngokuziphatha" ukuqesha abantu abavela "kuzo zonke iimvelaphi" nangayo nayiphi na "Isizathu sokuba aqeshwe ngaso nasiphi na isizathu ngaphandle kwetalente enkulu azisa nayo eBayer bubuxoki. ”
Kwi-imeyile eya kuWillbrand yomhla we-18 kuSeptemba 2019, uTravis wamxelela ukuba uBayer wayecinga ukuba kukho "ixabiso lokwenyani" lokubandakanyeka kukarhulumente wase-US kwisibhengezo se-glyphosate, kwaye waqaphela ukuba iBayer yayiququzelela amanye amaqela ukuba aqhankqalaze lo mthetho.
"Ekugqibeleni kwethu, sifundisa amaqela amafama, amasimi kunye namaqabane ezoshishino ukuze nabo bakwazi ukuchaza iinkxalabo kunye nesidingo senkqubo engqongqo, esekelwe kwisayensi," uTravis ubhalele uWillbrand. UWillbrand emva koko wathumela i-imeyile ku-McKinney, i-USDA's Under Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs.
Ngomhla we-Okthobha 8, 2019, intambo ye-imeyile enomxholo othi "Isishwankathelo seThailand Ban - Uphuhliso luhamba ngokukhawuleza," uTravis ubhalele uMarta Prado, usekela-Meli we-US oMele ezoRhwebo kuMazantsi mpuma eAsia nasePacific, bekopa uWillbrand nabanye. kubo kwimeko.
UTravis ubhale ukuba iThailand ikhangeleka ikulungele ukuvala i-glyphosate ngesantya "esimangalisayo", nge-1 kaDisemba ngo-2019. Kunye ne-glyphosate, ilizwe belicwangcisela ukuvimba esiyi, isibulali-zinambuzane esenziwe yathandwa yiDow Chemical esaziwayo ukonakalisa iingqondo zeentsana; kwaye iparaquat, Isazinzulu ngonyango sithi sibangela isifo senkqubo yemithambo-luvo esaziwa njenge-Parkinson.
UTravis uchaze umngcipheko wokuvalwa kwe-glyphosate ekuthengiseni izinto zase-US ngenxa yengxaki ye-MRL kwaye wanikezela ngeminye imvelaphi amagosa anokuyisebenzisa ukuzibandakanya neThailand.
"Ngenxa yezinto ezisandula ukwenzeka, sikhula sixhalabile kukuba abanye abenzi bomgaqo-nkqubo kunye nabenzi bomthetho bayayingxamisa le nkqubo kwaye abayi kubuza ngokufanelekileyo kubo bonke abachaphazelekayo kwezolimo okanye baqwalasele ngokupheleleyo ifuthe loqoqosho kunye nokusingqongileyo lokuthintela i-glyphosate," uTravis ubhalele amagosa ase-US.
Ukutshintshiselana nge-imeyile kubonisa ukuba iBayer kunye namagosa ase-US baxoxe ngezizathu ezinokubakho zokukhuthaza amagosa aseThai kunye nokuba olo lwazi lunokuba luncedo njani. Ukwazi ukuba yintoni emkhuthazayo kunokunceda kwiingxoxo eziphikisayo ze-USG, "elinye igosa laseMelika ubhalele iBayer malunga nenkokheli enye yaseThai.
UTravis ucebise ukuba amagosa ase-US azibandakanye kakhulu njengoko babenzile neVietnam xa ilizwe lalihamba ngo-Epreli 2019 Ukuthintela i-glyphosate.
Kungekudala emva kwesibheno esivela eBayer, uMcKinney wabhalela iNkulumbuso yaseThailand ngalo mbandela. Kwi Okthobha 17, 2019 ileta McKinney, ngaphambili wasebenzela AbakwaDow Agrosciences, bameme amagosa aseThailand eWashington ukuba axoxe nabantu malunga nokhuselo lwe-glyphosate kunye nokuzimisela kwe-Arhente yoKhuselo lwezeNdalo ukuba i-glyphosate "ayibeki mngcipheko empilweni xa isetyenziswa njengokugunyazwa."
"Ukuba ngaba ukuphunyezwa kwesibhambathiso kuya kuba nefuthe elibi ekungenisweni kwezinto zolimo zaseThailand ezifana neembotyi zesoya nengqolowa," ubhale watsho uMcKinney. "Ndiyakubongoza ukuba ulibazise kwisigqibo se-glyphosate de sikwazi ukwenza amalungiselelo eengcali zobuchwephesha zase-US ukuba zabelane ngolwazi olufanelekileyo ukulungisa iingxaki zaseThailand."
Kancinci ngaphezulu kwenyanga kamva, ngoNovemba 27, Thailand Ukuguqula umva ukucwangciswa kwe-glyphosate. Ikwatsho ukuba iyakulibazisa ukuvalwa kweparaquat kunye ne-chlorpyrifos kangangeenyanga ezininzi.
I-Thailand igqibe ukuvalwa kweparaquat kunye ne-chlorpyrifos ngoJuni 1, walo nyaka. Kodwa i-glyphosate ihlala isetyenziswa.
Xa ebuzwa malunga nokuzibandakanya kwakhe namagosa ase-US malunga nalo mbandela, uBayer wakhupha le ngxelo ilandelayo:
"Njengeenkampani ezininzi kunye nemibutho esebenza kumashishini alawulwa kakhulu, sinikezela ngolwazi kwaye sinegalelo ekwenzeni imigaqo-nkqubo esekwe kwisayensi kunye neenkqubo zolawulo. Ukudibana kwethu nabo bonke abakwicandelo likarhulumente yinto yesiqhelo, enobuchule, kwaye iyahambelana nayo yonke imithetho nemimiselo.
Ukuguqulwa kwabasemagunyeni eThailand ekuthinteleni i-glyphosate kuyahambelana nokumiselwa okusekwe kwisayensi yimibutho yolawulo kwihlabathi liphela, kubandakanya eunited States, iYurophu, Jemani , Ostreliya, Korea, Khanada, Nyu Zilend, Japhan nakwezinye iindawo ezigqibe kwelokuba iimveliso zethu ezisekwe kwi-glyphosate zinokusetyenziswa ngokukhuselekileyo njengoko kuyalelwe.
Amafama ase-Thai asebenzise i-glyphosate ngokukhuselekileyo nangempumelelo kumashumi eminyaka ukuvelisa izityalo eziyimfuneko kubandakanya iicassava, umbona, iswekile, iziqhamo, isundu seoyile kunye nerabha. IGlyphosate incede amafama ukuba aphucule ubomi bawo kwaye ahlangabezane nolindelo lwabahlali lokutya okukhuselekileyo, okufikelelekayo okuveliswa ngokuzinzileyo. ”
Pesticides, Akohlulwanga kuvalwa, umhlaza, esiyi, Iimpahla, indawo, EPA, glyphosate, impilo, ku ngeniswa, IMonsanto, MRL, paraquat, inambuzane, miselo, iintsalela, Yisonge yonke, inzululwazi, zesoya, Thayilendi , trade, ISebe Lezolimo lase-US, USDA, ngqolowa
I-Dicamba ibisoloko isetyenziswa ngamafama ukusukela ngee-1960s kodwa ngemida ethathela ingqalelo ukuthambeka kwemichiza ukukhukhumala kunye nokuhamba-hamba kude ukusuka apho wafafazwa khona. Xa iimveliso zokubulala ukhula ezithandwayo zeMonsanto, ezinje ngeRoundup, ziqala ukuphulukana nokusebenza ngenxa yokuxhathisa ukhula, iMonsanto yathatha isigqibo sokumilisela inkqubo yokulima i-dicamba efana nenkqubo yayo eyaziwayo yeRoundup Ready, eyayibhangqa iimbewu ezinyamezelayo ngeglyphosate kunye ne-glyphosate herbicides. Abalimi abathenga imbewu entsha ye-dicamba enganyamezeliyo yemfuza banokunyanga ngokulula ukhula olunenkani ngokutshiza amasimi onke nge-dicamba, nditsho nakwiinyanga ezikhulayo ezishushu, ngaphandle kokonakalisa izityalo zabo. IMonsanto uxele intsebenziswano kunye ne-BASF ngo-2011. Iinkampani zithe i-dicamba herbicides yabo iya kuba mbalwa kakhulu kwaye ingathambekisi kangako kuneendlela ezindala zedicamba.